पैसा तिर्ने हो? कोरोनाको परीक्षण तुरुन्तै - समय-समाचार
पैसा तिर्ने हो? कोरोनाको परीक्षण तुरुन्तै
१ असार २०७७, सोमबार ०१:५६
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यक्तिले पैसा तिरेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न पाउने निर्देशिका बनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनासङ्ख्या मन्त्रालयले निजीले पनि पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै व्यक्तिले पैसा तिरेर परीक्षण गर्न चाहेमा पाउनेछन् । तर, पीसीआर परीक्षणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका निजी प्रयोगशालाले मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन् । सरकारले संकलन गरेको स्वाबको भने शुल्क लाग्ने छैन ।
यदि सरकारी ल्याबले परीक्षण गर्न नभ्याएमा सरकारले नै संकलन गरेको स्वाबको परीक्षण निजी ल्याबमा गर्न सकिनेछ । त्यसको खर्च भने सरकारले ब्यहोर्नेछ । आइतबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निजीमा परीक्षण गराएको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने जानकारी दिए ।
व्यक्तिले पैसा तिरेर गर्न चाहेमा शुल्क ५ हजार ५ सय तोकिए पनि शुल्कमा विवाद देखिएपछि आइतबार निर्देशिका जारी हुन सकेन । सरकारले निजीमा परीक्षण गराउँदा कति शुल्कमा गर्ने भन्ने पनि तय भएको छैन । उक्त निर्देशिका मन्त्रालयले आज जारी गर्दै छ । ‘निर्देशिका केही कारणले आइतबार जारी हुन सकेन,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले भने, ‘आज निर्देशिका आउँछ । पैसा तिरेर म आफैँ परीक्षण गर्छु भन्नेले त्यो पनि बाटो खुलेको छ ।’
सरकारले अहिले २० ठाउँबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दै आएको छ । तर, सरकारको मात्र प्रयोगशालाले नभ्याएपछि निजीबाट पनि परीक्षण गर्न लागिएको हो । अहिले दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा सरकारी ल्याबबाट परीक्षण भइरहेको छ ।